ကျုံ.နိုင်ဆန့်နိုင်အားကောင်းသည့် တာရှည်ခံသုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ နံရံရှိဆံချည်မျှင် အက်ကြောင်းကလေးများအား ဖြည့်ဆည်းဆက်စပ်ပေးနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသော နံရံမျက်နှာပြင်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သော အဆင့်မြင့်သုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
နံရံအပြင်ဘက်ထောင့်ချိုးနေရာများ၊မူလဆေးသုတ်ထားပြီးရေမလုံ၊ ရေစိမ့်ထွက်နေသောအပေါက်ရာလေးရှိသည့် အတွင်းမျက်နှာပြင်များ၌ရေလုံလွှာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အလှဆင်ရေလုံအဆင့်မြင့် သုတ်ဆေးအဖြစ် အဆောက်အဦးဧ။်အတွင်း၊အပြင် မျက်နှာပြင်များ၌အလှဆင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကွန်ကရစ်၊ဘိလပ်မြေ၊ဖိုင်ဘာ၊ဘိလပ်မြေပြားနှင့် သင့်လျော်အောင်ပြုပြင်ထားသည့် သစ်သားမျက်နှာပြင်များ၌သုတ်လိမ်းနိုင်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊အလှဆင်တံခါးများ၊၀န်းခြံတံခါးများ၊ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာတံခါးများ၊အထူးသဖြင့် အတွင်းဘက် ရေနှင့် ထိတွေ.မှုရှိသည့်အခြမ်း၌အသုံးပြုနိုင်သည်။
သုတ်လိမ်းမည့်မျက်နှာပြင်တွင် ချိုင့်ခွက်များ၊အပေါက်များရှိပါက ကြိုတင်၍ပတ်တီးဖြင့်ဖာထေးပါ၊
သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Decoflexကိုလိုချင်သောအထူအနေအထားရရှိစေရန် ဒလိမ့်(သို့) စုတ်တံတို့ဖြင့်နှစ်ထပ်၊သုံးထပ်ခန့်သုတ်လိမ်းပေးပါ၊ဆေးတထပ်နှင့်တထပ်အကြားသေချာစွာခြောက်သွေ.ပါစေ။
ချောမွတ်သောကွန်ကရစ်၊သစ်သားနှင့် သံမျက်နှာပြင်များတွင် Decoflexကိုသန့်ရှင်းသောရေ၁၀% နှင့်ရော၍ Primer အဖြစ်သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။
Decoflex အားနောက်ဆုံးအလှဆင်သုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖုန်မှုန့် နှင့် အခြားလေထုကြောင့် ဖြစ်စေတတ်သောအညစ်အကြေးများကပ်ညှိမှုမရှိစေရန် ဂရုပြုသင့်ပါသည်။
Deco-Decoflex High Performance External Wall Protection Systems
DuraKote isamicrofibre reinforced, extremely durable, high performance elastic protective coating system designed for use in exterior environments. DuraKote has been specially formulated to provideaready to use, easy to apply water-based system to provide maximum protection to buildings. Its integral microfibre reinforcement enables it to fill and bridge hairline cracks and to accommodate substrate movements in the harsh cyclic thermal regimes of tropical climates. DuraKote is also enable to maintainaclean exterior surface withaminimum of maintenance.
Algae, Fungus Resistant
Looks like, works like paint; but out-performs regular paints No mixing required, use direct from can, no errors in application No special equipment required, applied by brush, roller or airless spray Will not discolour tiles, stone or other cladding, or cause water stains No lingering objectionable chemical or solvent smell Formsahomogeneous, protective exterior barrier with no laps or joints Adheres strongly to all types of clean surfaces Prevents penetration of wind driven rain through the coated surfaces Specially formulated to resist UV conditions of the tropics Resist algal, fungal and mould growth
Colours White or other Architectural colours
Composition Synthetic Rubber Elastomers
Appearance Soft Thixotropic Paste
Specific Gravity 1.28 to 1.35
Percent Solids Approx. 66%
Crack Bridging Ability Able to bridge cracks up to2mm
Surface Dry (Dust free) 1/2 to 1 hour (200 microns wet at 25°C )
Elongation 600% approximately AS 1145
Tensile Strength 3800 KPa @ 300% elongation (7 days @ 20°C, 600 hrs QUV @50°C) AS 1145
Water Vapour Transmission 15 gm/mV24 hrs ASTM 1653
Accelerated Weathering No defects ASTM D822A
Algal Resistance No growth SS 345 : 1990
Alkali Resistance No blistering, "wrinkling or lifting
Wet Scrub Resistance No wear off after 3000 cycles
Cyclone Testing Station Rating Class E achieved (maximum rating) James Cook Univ.
Fire Rating Class 1 over most surfaces BS476 Pt 1 to Pt 3